IHGH Pharmacy yaseThailand inikeza ukunikezelwa kwamahhala Genotropin kunye nezinye iimveliso zeHGH kuzo zonke iindawo zaseThailand
Ukuhanjiswa kwee-Courier eBangkok
Ukuthunyelwa kwee-Courier eBangkok - i-pharmacy yethu ithatha imiyalelo evela kwi-9: 00 - I-8: 00 pm, imiyalelo efunyenwe phambi kwe-3: I-00 pm iya kuhanjiswa enye usuku.
Imiyalelo efunyenwe emva kwe-3: I-00 pm kusihlwa iya kuqhutywa Ngomso, zonke iinkonzo ezivela kwi-9: 00 kum3: 00 pm.
Ukuvakalisa ukuhanjiswa kunye nokuhlawulwa kwemali Bangkok. Sithumela ukukhula i-hormone nge-Air Cargo ukuya Chiang Mai, Phuket.
Veza iposi Pattaya, Hua Hin, Udon Thani, Koh Samui, Koh Chang, Suratkhani kunye nazo zonke izixeko kunye namaphondo aseThailand.
Ndingayenza njani umyalelo?
Emva kokuba usenze umyalelo kwiwebhusayithi yethu ngebhaksi okanye ngokusebenzisa umcebisi kwiwebhusayithi, ukuqinisekisile idilesi kunye nexesha lolawulo, i-courier yethu iqala ukubeka ekulungiseleleni ukupakishwa kwehomoni yokukhula.
"Nceda ushiye ulwazi lwakho loqha ga mshelwano ukuba uqhagamshelane nawe, i-imeyile, ifowuni
inombolo okanye i-Whatsapp, umgca, iViber (xa kungabikho kwenombolo yeThai) ".
Ukupakisha kunye nezixhobo
Siza kufaka iGenotropin kwisitya sezokwelapha ngeqhwa, ukuya ukugcina ubushushu obulungileyo bokugcina i-hormone yokukhula i-2-8 degrees.
Ikiti iquka (ngaphandle kwentlawulo):
Izixhobo ze-BD Ultra Fine Pen (iinqununu ze-40) nganye ipeni
Isitya sokupholisa ukugula (ii-2-8 iqondo lokushisa)
Emva kokupakisha umyalelo, i-courier yethu iya kuqhagamshelana nawe ii-1-2 iiyure ngaphambi kokuziswa (ukuqinisekisa umyalelo wakho)
I-courier iya kuhambisa umyalelo kwindlu yakho, ihotele, indlu okanye indawo yentlanganiso (umz.
Emva kokufumana umyalelo kufuneka uhlawule umthumeli ngemali (siyavuma ibhahti kuphela yeThai).
Ukuthumela imveliso yeGenotropin ithatha imihla ye-1-2 ePhuket naseChiang Mai.
Kuza kube yimhla, asinakuthunyelwa kwe-courier eChiang Mai nasePhuket (utshintshe iinkcukacha zomcebisi kunye nokunikezelwa okongeziweyo ukhetho).
Thola i-hormone yokukhula ePhuket okanye eChiang Mai nge-terminal ye-Air cargo terminal
Indlela yokubeka umyalelo e-Phuket kunye neChiang mai?
Emva kokubeka umyalelo wakho ngebhayisiki yomcebisi kwi iwebhusayithi, ifowuni okanye i-imeyile
"nceda ubonise igama lakho lokuqala kunye negama lokugqibela ukufumana amagosa kwaye
Sizakukuthumela iinkcukacha zethu zebhanki ngenkokhelo, ukuqinisekiswa idilesi yokuhambisa, ngoko siya kuqhagamshelana nawe ngefowuni ukuze uqhubeke iinkcukacha.
Emva kokufumana intlawulo kwi-akhawunti yethu yasebhanki. I-courier yethu evela kwi-9: 00 I-8: I-00 pm iya kuthumela i-oda lakho kwisikhululo se-Bangkok kwisibhedlele isitya kunye neqhwa, ngeenkonzo zokuhambisa umoya we-Thai Airways impahla eThailand. Sifaka amaxwebhu afanelekileyo, igama kunye negama lommkeli, kunye nesixeko kunye neesikhumulo sezindiza apho umthengi angafumana umyalelo wakhe. Yonke imiyalelo ithunyelwa yindiza yokuqala.
Indlela yokufumana umyalelo?
Ukuqokelela umyalelo kulula kakhulu, ufuna nje ukuya esikhuphonini, Isikhumbuzo se-Air Cargo, kunye nepasipoti okanye ikhadi le-id ukufumana umyalelo wakho. Kufuneka unikeze kumqeshwa we window yokuhambisa i-Air cargo ukufumana i-oda yakho.
Ukuthunyelwa kweGenotropin eHua Hin, ePataya nakwezinye izixeko kunye nemimandla
eThailand (iintsuku ze-1-3)
Ukuthunyelwa eHua Hin, ePataya nakwezinye iidolophu nakwiindawo zaseThailand lenziwe ngumhlawulo wokuhlawula kuqala usebenzisa i-EMS yokuthumela inkonzo yeposi yaseThailand. Emva kokufumana umyalelo ngokusebenzisa umcebisi kwiwebhusayithi okanye I-order order (idilesi kunye neenkcukacha zoqhagamshelwano) Siza kuthumela iinkcukacha zokuhlawula i-akhawunti yethu yasebhanki yaseThai. Emva koko ukufumana intlawulo, i-courier yethu iya kuqhuba ukukhula kwempahla ihomoni kwiphakheji yonyango yokuthumela kumthengi. Ukuthumela kuvela kwi-9: 00 kum 8: 00 pm nge-EMS ukuthumela iThailand inkonzo (ithatha imihla ye-1-3 kuxhomekeke kwidilesi yokuhambisa)
Emva kokuthumela, siya kukuthumela inombolo yokulandelela yakho, wena uya kuyifumana kwidilesi yakho yokuhanjiswa kwindlu.
Indlela yokwenza idluliselo kwi-akhawunti yebhanki eThailand?
Ukutshintshwa kweBhanki yindlela enokuthenjwa kunye nekhuselekileyo yokuhlawula iimpahla kunye neenkonzo eThailand, ngokwenza ukutshintshwa okufunekayo kuphela yayazi inombolo ye-akhawunti kunye neebhanki yokuxhamla.
Ukudluliselwa kunokwenziwa nayiphi na i-ATM usebenzisa ukuzaliswa kwemali kwi-ATM kwaye ucacise inombolo ye-akhawunti yommkeli.
Ukudluliselwa kungenziwa kumntu ngebhanki, ngokulula,
xelela umcebisi kwibhanki ofuna ukuyifaka kwaye iya kuyenza
ungathathi ngaphezu kwemizuzu eyi-15.
Hayi. Ndathumela umfanekiso weskrini. Ingaba uyifumene?
Suzanentic Novemba 06, 2018
SuzanWhicy Novemba 02, 2018
Ewe, siqiniseke kwiofisi yethu eBangkok
iintlawulo ze-intanethi ngekhadi lesikredithi ayitholakali
Jan Agasti 03, 2018
Ndiyakwazi ukuhlawula ngekhadi lekhredithi?
Michael Julayi 24, 2018
Buyela kwindlela yokufumana iHGH eThailand? Ukuthumela & ukuhlawula i-FAQ